Akụkọ anyị - Guangdong Xinzhihui Packaging Technology Co. Ltd.
Dongguan Xinzhihui Champion Packaging Industry Co., Ltd. hiwere na 2005, debara aha CNY 200 nde.Ọ na-ekpuchi mpaghara nke 60000 square mita.We na-elekwasị anya na nyocha na mmepe, ma mepụta ụdị ihe nkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi na ngwaahịa. plywood, pallets, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ HDPE, igbe igbe belt pụrụ iche, nkuku akwụkwọ, bọọdụ mmanụ abụ, katọn, kechie fifilm / stretch fifilm, arụmọrụ dị elu, akpa ikuku, akpa Pee, eriri EPE na ihe mkpuchi dị iche iche na ihe enyemaka.
Companylọ ọrụ anyị eguzobewo ọkachamara R & D ọkachamara na nyocha, nnwale na ule ọrụ. Mejuputa ISO9001: 2015 na ISO14001: 2015 usoro mmesi obi ike gburugburu ebe obibi, QS mma na sistemụ nchekwa na wdg. Anyị webatakwara usoro ERP zuru oke, nke na-eme ka njikwa arụmọrụ na-arụ ọrụ sayensị, ahaziri, dijitalụ. N'ọdịnihu, Xinzhihui ga-esonye na njikwa nke ndị ahịa na-eweta nguzosi ike n'ezi ihe, ntozu okè na mmezu. Na-ezute mkpa ahaziri nke ndị ahịa, ma na-aga n'ihu ịmepụta uru maka ndị ahịa.
Xinzhihui kpebisiri ike ịghọ onye na-eduzi ụlọ na nke a ma ama nke mba ụwa pallet nke na-eme ka ndị ahịa tụkwasị obi, na-eme ka ndị ọrụ hụ n'anya ma mee ka ọha mmadụ na-asọpụrụ
OZI ỌR CHAKA
Dị ka a emeputa nke gburugburu ebe obibi nkwakọ, nnukwu ibu ọrụ nke Dongguan Xinzhihui onye mmeri Packaging Co, ltd. bụ imepụta ihe okike nke nwere ike izute ihe ndị ahịa chọrọ. Yabụ, inye onyinye na ọha mmadụ iji nweta ebumnuche ụlọ ọrụ anyị: Teknụzụ na-eme ka ndụ ka mma.
Iji nwee ike ịga n'ihu na-aga n'ihu na teknụzụ ọhụụ, ọ na-ekwere na usoro azụmaahịa na echiche ọrụ nke njikọta nkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe ọ bụ na e guzobere ya. Dịka onye isi oche nke XH PACK, enwere m olile anya na ọtụtụ ndị nwere nrọ na ebumnuche na-eme nnukwu ihe site na ikpo okwu ụlọ ọrụ yana ime ka ọtụtụ ezinụlọ nwee obi ụtọ.
Na-ele anya n'ọdịnihu, sta ﬀ nke XH PACK ga-agbalịa ike ha niile ịbụ ihe ọhụụ ma na-agbaso oge. XH PACK ga-abụ onye na-emepụta ihe na-emepụta gburugburu ebe obibi, ya na ndị ọrụ ọkachamara, mmụọ mmepe nke onwe na teknụzụ (dịka R & D, nzube, ịzụ ahịa, ọrụ lọjistik, wdg). N'okwu a, ọ ga - abụ ezigbo kachasị mma maka nkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi na lọjistik maka ndị ahịa klaasị ụwa.
Anyị na-emepe ma na-akwalite ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa nke enwere ike kesaa ma zigharịa ya gburugburu ụwa; Anyị na-eji kụrụ dị ka ihe nkwakọ ngwaahịa; Anyị emepewo achara na-eto eto kwa afọ dị ka ihe eji akwakọ ngwaahịa.
Na June, 20th 2019, Guangdong Xinzhihui Packaging Technology Co., Ltd. tọrọ ntọala, ọkachasị raara nye mmepụta nke ngwaahịa ngwaahịa.
a factory e hiwere na Weihai City, Shandong Province.
nke ewuru isi obodo nke 200 million yuan na Qiaotou Town, Xinhong Champion Industrial Park, gha atọrọ ntọala maka njikọta akụ, mmezi gburugburu ebe obibi na sistemụ usoro.
guzobere na Singapore, XH Champion Co. ， Ltd. ful-lled na ulo oru upgrading si nkwakọ ngwaahịa → n'ozuzu nkwakọ ọrụ; Na July 15th, 2016, na-edepụta nke ọma na ahịa ahịa, koodu ngwaahịa ya bụ 667803.
Ebupụrụla ngwaahịa Xinhong na mba ofesi dịka Vietnam, Philippines, Malaysia, Spain na Singapore na ihe ndị ọzọ.
On Mar. 18, 2013, Dongguan Xinhong onye mmeri Packaging Industry Co., Ltd. emewo ka dị ka mmepụta isi ka zuru okè n'ozuzu nkwakọ ụlọ ọrụ yinye. All anyị chọrọ na-agbalị kasị mma anyị na-kasị ọkachamara soplaya nke mkpo nkwakọ na China. On Sept. 29th, 2013, Guangzhou Division na-enye mkpokọta nkwakọ ngwaahịa na JIT Service maka ndị ahịa.
Suzhou Division na-enye mkpokọta nkwakọ ngwaahịa na JIT Service maka ndị ahịa.
Na Ọgọstụ 2nd, 2005, nke onye isi ụlọ ọrụ Tan Deren guzobere, Shenzhen Xinhong Packaging Material Co., Ltd, etinyela aka na ngwaahịa osisi ọkachasị tinyekwa akara mmepụta nke post post & Stretch ﬁ lm.
e guzobere ntọala plywood na Huizhou City.
anyị etinyewo aka na ụlọ ọrụ osisi.